August 19, 2020 Dai 8, 2022 0
Iyo yeGlass Note yakateedzera, kusvika panguva yekuuya kwe foldable Z mutsara, yakamiririra ipini yenharembozha ye Samsung. Samsung inokupa simba kuti iwe ugone kuwedzera kugadzirwa neGlass Note, uye kuwana mastery ezvese zveGreal Note's maitiro kunogona kushandura nzira yaunoshandisa foni yako kubasa (uye kutamba). Izvi ndezvechokwadi zvakanyanya nezvechangobva kutangwa Samsung Galaxy Cherechedzo 20 Ultra 5G. Iyo Galaxy Note 20 Ultra 5G yakakodzerwa nechikwereti kwete chete pakuita kuti hupenyu huve nyore kune vashandisi asiwo nekuivakurudzira kuti vatsvage uye vazadzise zvimwe pamafambo emunhu uye nyanzvi.
Iyo Glass Note 20 Ultra iri pamberi pekombero mune dzimwe nzira kupfuura imwe, uye uchave nenguva yakaoma yekuisa maoko ako pairi. Ndazvionairresistible. ” kutanga kufungidzira, uye kunzwa ikoko kwaramba kuneni kubvira. Nekudaro, mushure mekupedza imwe vhiki neiyo Samsung's Ultra-premium smartphone, ndasvika pakufarira zvimwe zveiyo nuances.
Ini, hongu, ndichakurukura aya nuances mune yangu ongororo yeiyo Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Asi chekutanga, heino kuongororwa kweiyo yakatarwa yeiyo Galaxy Note 20 nhevedzano.
Samsung Galaxy Cherechedzo 20 Series Maitiro
Samsung Galaxy Cherechedzo 20 Ultra
X X 161.6 75.2 8.3 mamirimita
X X 164.8 77.2 8.1 mamirimita
6.7-inch FHD + Super AMOLED
60Hz zororo zororo
HDR10 + rutsigiro
6.9-inch QHD + Dhimoni AMOLED 2X
Adaptive zororo reti rutsigiro
Gorilla Girazi 7 / Kukundwa
Qualcomm Snapdragon 865 Plus, kana
Hapana microSD kadhi yekuwedzera slot
Akazvitsaurira microSD kadhi kadhi slot yekuwedzera kusvika 1TB
25W wired nekukurumidza kutsvaira kutsigira
15W isina waya yekuchaja tsigiro
Revers waya yekuchaja tsigiro
Kutanga: 12MP, f / 1.8, Dual Pixel AF, OIS, 1 / 1.76 ″ sensor
Sekondari: 12MP, f / 2.2, yekupedzisira-yakakura-pakona, 120 ° FoV
Chikoro chepamusoro: 64MP, f / 2.0, telephoto, 3x Hybrid Optic Zoom
Kutanga: 108MP, f / 1.8, PDAF, Laser AF, OIS, 1/33 ″ sensor
Chikoro chepamusoro: 12MP, f / 3.0, telephoto kamera, 5x Optical zoom
LTE: Yakakwidziridzwa 4 × 4 MIMO, Kusvikira 7CA, LTE Cat.20 - Kusvikira pa 2Gbps Dhawunirodha / Kusvikira ku200Mbps Kuisa.
Wi-Fi: Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 2.4GHz + 5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM
GNSS: GPS, Galileo, Girazi, Beidou
X X 5.8 4.35 105.08 mamirimita
Kusvikira pamakumi maviri nemairi hrs yebhateri yakamira
4096 kudzvinyirira mazinga
0.7mm peni yeyipi dhayamita
In-kuratidza yakadarikidza chigunwe chemunwe sensor
Wireless DeX rutsigiro
Ultra Wide Band (UWB) chip yekushandiswa-kune-mudziyo kubatana uye nekukurumidza kuendesa mafaera
Android Version Imwe UI 2.5 yakavakirwa paApple 10 OneUI 2.5 yakavakirwa paApple 10
Chakavanzika Bronze (matte)
Chakavanzika Nhema (glossy)
Chakavanzika Chena (chakajeka)
Nezve ongororo iyi: Samsung India yakweretesa kwandiri 12GB + 256GB musiyano weGreen Note 20 Ultra 5G poweredzwa neExynos 990 SoC. Nekudaro, ivo havana kuwana zvigadzirwa pane izvo zvaiongororwa. Ndanga ndichishandisa foni kwemazuva gumi uye aya ndiwo maitiro angu ekucherechedza mushure mekuenderera mberi kushandiswa.
Kufunga kwangu kweiyo Galaxy Cherechedzo 20 Ultra dhizaini zvachinja zvakanyanyisa kubva pandakanyora nezve zvandakatanga kufunga. Girazi yakakwenenzverwa kumashure - inogadzira kunyepedzera kwesimbi yekupedzisa simbi - yakarongedzwa nekrisimasi-yakasungwa njanji parutivi kutaura kwekunaka uye kunaka. Njanji dzepadivi dzinodhonzwa pakati pemativi akapetwa epaneri rechishure pamwe nechiratidziro, nepo kumusoro uye zvikamu zvepazasi zvakabhururuka kunze, zvichiwedzera pfungwa yekusanzwisisika mukuumbwa kwakaomarara. Pane yeGlass Note 20 Ultra, Samsung iri kurega makona akavezwa aripo pane Galaxy Cherechedzo 10+ (kuongorora kwedu), nekudaro, ichiwedzera kune kwayo inopinza (pun yakagadzirirwa).
Panyaya yemipimo, iyo itsva Galaxy Note 20 Ultra yakaomeswa pakukora (8.1mm vs 7.9mm) uye zvakareba (~ 165mm vs 162mm) pane iyo Galaxy Note 10+. Izvo zvakabvumira Samsung kutambanudza kuratidza zvishoma zvishoma (0.1 inches kana anenge 2.5mm) uye nekukwanisa kuwedzera zvishoma kumusoro-kumusoro-mumuviri zviyero (91.7%) paGeneral Note 20 Ultra kana ichienzaniswa neGreen Note 10+ (91%) . Idzi shanduko dzeminiti dzinogona kutorwa neruoko rwetsinye asi hazvibviri kucherechedzwa nevakawanda vanongoona.
Chii chinogona, zvakanyatsojeka, kubata vakawanda kutarisa kwevanhu ndiko kuwedzera kwehuremu nemagiramu gumi nemairi. Vanhu vanoona huremu hwea-smartphone nenzira dzakasiyana - vamwe vanoishandisa sehwaro hwevimbiso mumhando uye kuomarara kwezvinhu zvacho vamwe vanogona kuzviwana zvichitambudza uye zvichitadzisa kushandiswa. Ini ndoitika kudonha mune yekupedzisira chikamu. Ini ndinosarudza mafoni anorema zvisingasviki mazana maviri egiramu. Iwe unogona kunge uine mwero wakasiyana wekushivirira mune izvi, kunyanya kuisimbisa muzvivakwa izvi zvinopihwa nefoni.
Kune vashandisi vanotsvaga iphakeji yakafanana mune imwe diki fomu chinhu, Samsung yakatangisawo iyo Galaxy Note 10 gore rakapfuura iyo yaive yakafanana neiyo yakakura Galaxy Note 10+ nepo iri nyore kubata. Izvo zvachinja gore rino neGlass Note 20 iyo iri mbiri yakajeka kubva kuGlass Note 20 Ultra uye zvakare yakadhirowa mupurasitiki, yandinofunga sey mhedziso dhiza-gadzira mutengo wayo.
Chimwe chinhu chinogona kutora pakarepo kutarisa kwevanhu ndechekukwirira kwekamera. Iyo Galaxy Note 20 Ultra's kamera bump inenge ingangoita yakapetwa nekaviri iyo iri paGirazi Onai 10+ - kwete chete maererano neukobvu asi zvakare maererano nenzvimbo iyo inogara kumashure kweiyo smartphone. Iyo kamera module inogara matatu makamera - epuraimari 108MP yakafara-pakona kamera, 12MP yekupedzisira-yakafara-angle, uye 12MP periscopic telephoto kamera. Uyezve, laser autofocus iri padivi peakarongeka matatu kamera. Samsung yabvisa iyo ToF (nguva yekubhururuka) sensor kubva kuGlobal Cherekedzo 20 Ultra nenzira yakakodzera nekuda kwekusafarira kwezve AR zvekushandisa. Ese makamera anotaridzwa neruvara rumwe chete nerumwe runhare, uye kwatiri, ruvara irwo MysticBronze.
Samsung inoitawo iyo Galaxy Inotarira 20 Ultra mune chena uye nhema vatema asi ine zvinyoro-nyoro kupera. Kunyangwe ini ndisati ndashandisa kana kana kuona kana imwe yemaviri aya mavara muhupenyu chaihwo, Ndinoziva ini ndingafarira kupera kwe satin pamwe nerunako rwebronze ruvara zvisinei. Chiratidzo cheSamsung chakaiswa pamusoro-yakawanda girazi denderedzwa repasuru yepaneri rinogona kunzwika zvakasiyana kubva kune yakasara kumashure kwekutenda kusvika kwayo kupera.
Kutaura nezvegirazi rekuseri, Samsung iri kushandisa denderedzwa ra Corning mutsva weGorilla Glass Victus iyo yekumashure. Corning anoti nerayo razvino uye rakanyanya kusimba reGorilla Girazi parizvino, mafoni anogona kupona anodonha kubva pamamita maviri uye anonyanya kudzivirirwa kukanda kupfuura zvavaive nezvizvarwa zvakapfuura zvegirazi rekudzivirira. Kunze kwepaneri rekuseri, iro riratidziro zvakare rakavharidzirwa naGorilla Glass Victus, nekuchengetedza kuchengetedzwa kwakanyanya pamativi ese. Tichifunga nezve mutengo weGlass Note 2 Ultra, ini handina kumbobvira ndaedza izvi asi ndingangopa kuva nehungwaru kana ukasarudza kuzviedza pachako. Imwe nzira yekudzivirira chero kukuvara ndeye kushandisa kesi yekudzivirira, uye isu takadzora rondedzero yacho nyaya dzatinofarira dze Samsung Galaxy Cherechedzo 20 Ultra kwako kusarudza kubva.
IyoGreen Note 20 Ultra ine IP68 chiyero zvinoreva kuti yakayerwa kuti ipone kungoita imwe nguva kunyudzwa mumvura, ichibvumira zvikanganiso uye kusekerera. Kunyangwe IP68 yakave yakajairika pakati pekutanga smartphones, chiyero chinowanzo kusanzwisiswa sekuvimbisa kuchengetedzwa kwakakwana kumvura. Chiyero cheIP68 chinoreva kuti chishandiso chinogona kushanda mushure mekunyudzwa mu 1.5 metres (anenge mashanu emamita) emvura yakachena kwemaminetsi makumi matatu. Ndiwo iwo pamusoro-soro hunobvumirwa hunhu, uye chero chipi zvacho chinopfuura icho chinga - uye pamwe ucha - kukuvadza foni mukati.
Iyo yekusiyana kweIndia yeiyo Samsung Galaxy Note 20 Ultra ine iyo yakaganhurirwa SIM slot, asi izvi zvinogona kusiana nedunhu uye kana uchitenga mutakuri wakakiyiwa kana usina kuvhurwa mudziyo. Ndine yunivhesiti isina kuvhurwa ine Exynos 990 chipset mukati iyo inondibvumidza kushandisa maviri epanyama SIM kadi kana imwe SIM kadhi uye microSD kadhi. (Iyo inogara ichingori yeGlass Note 20 haitsigire kadhi MicroSD, nenzira!) Samsung yakawedzerawo eSIM kutsigirwa pachishandiso kuitira kuti ukwanise kushandisa zvakanakira zvese zviri zviviri SIM pamwe nekuwedzera inochengeterwa, chero mutakuri wako anotsigira eSIM kupa , Eheka.
Kana zvasvika kune yekututsira setup, Samsung inoshandisa vatauriri ve stereo neimwe yakatarisana kuzasi uye imwe yakagara mukati mezevezeve. Hunhu hwekurira uye chiyero pakati pevatauriri ve stereo chimwe chinhu chatinokurukura muchikamu cheKushanda kwekuongorora uku.
Iyo Glass Note 20 Ultra ine yakasimba mumuviri inogona kunge yakareba uye yakakura kune vashandisi pakutanga, asi Samsung iri kushandisa tese nzvimbo yemukati kusvika pakukora kwakanyanya. Iyo inoratidzira kumashure dhizaini pamwe neyakajeka uye inonamira kuratidza inokweretesa Galaxy Note 20 Ultra yakajeka uye notechitarisiko chakakodzera.
Samsung iri kushandisa yayo yazvino 6.9-inch Super AMOLED kuratidza paGirazi Tarira 20 Ultra. Sezvatinotarisirwa pese panoratidzwa Samsung, iyo inoshandiswa muGreen Note 20 Ultra inopenya uye inoburitsa mavara anoyevedza. Kusiyana nechiratidziro kuGirazi S20 Ultra ine huwandu hwemakumi maviri neshanu, iyo inoratidzwa paCherechedzo 20 Ultra inoratidzira yakaenzana neyakaenzana 9: 20 chikamu asi pasina kutaridzika kwakajeka mukugadzirisa. Iyo Galaxy Note 19 Ultra's show ine resolution ye9 x 20 pixels (WQHD +) ine pixel density ye 1440ppi. Iwe unogona kuyera chigadziro pasi kuzere HD Full + kana HD +, uye izvo zvinodzikisa pixel density zvinoenderana. Pane yakazara HD + resolution, iyo pixel density inenge 3088ppi. Kune ziso rakashama, izvi zvakasiyana hazviite mutsauko, saka ndakanamatira kuzere HD resolution. Izvo hazvisi chete zvinobatsira mukuchengetedza hupenyu hwebhatiri asi zvakare zvinobatsira kukunda imwe yakakura dhizaini ye Samsung yemhando yepamusoro kuratidza.
Iyi yekudzoka inoenderana neiyo yakanyanya kuratidza yekuzorodza regedhiyo yeGreen Note 20 Ultra. Iyo inoratidzwa inoshandiswa muiyo Samsung Galaxy Note 20 Ultra inotsigira yakanyanya kuzadzikiswa 120Hz zororo, asi kungofanana neiyo kuGirazi S20 Ultra, mwero wekuzorodza unodzikiswa kusvika pa60Hz iyo kuratidzwa kuri kumhanya pakugadziriswa kwayo kwekutanga. Kutsiva kushomeka kwekunyorova kupururudza pakugadziriswa kwepamusoro, Samsung yaita "Adaptive" yekuvandudza mwero wekuchinja, inozivikanwawo seyakafanana yekuzorodza reti. Izvi zvinobvumidza iyo kuratidza kuti isamane pakati pesimba rekuvandudza matengo, semuenzaniso ku:
120Hz yemazuva ese mashandiro muUI akadai sekupaza mukati uye / kana kutanga programu,
120Hz, 60Hz, kana 30Hz yemitambo - zvichienderana nehuremu hwakanyanya hwemutsigiro unotsigirwa nemutambo,
24Hz yemafirimu kuti iwirirane neye cinematic frame rate, uye
10Hz uchiri kuverenga zvimedu zvemukati.
Kugadziriswa kweiyo yekushandurwa kwechiyero chekuzorodza kwakasiyana kubva paAdaptive V-Sync pane vatambi vemitambo, sezvo chiratidziro hachisi kunyatsochinja zviyero zvekuzorodza kuti zvienderane neyakaenzana neye GPU. Izvo kunze kwekuti iyo Galaxy Inota 20 Ultra ndiyo kutanga chishandiso chine AMOLED kuratidzira kutsigira kusiyanisa yekuzorodza rate switching. Inofungidzirwa kuti chikonzero chiri shure kweizvi imhaka yekushaikwa kwekutsigirwa kubva kuApple. Zvisineyi, kukwanisa kumuisa musvinu kuenda kune rakaderera zororo zamu yezvinhu zveastoic zvinofanirwa kuvandudza hupenyu hwebhatiri. Sekureva kweSamsung, adaptive yekuzorodza rate switching inogona kuwedzera hupenyu hwebheti ne22%.
Nekuda kwekuunzwa kwechokwadi chinosarudzika dhizaini chiyero nerubatsiro rwePFPO, hapana chinoonekwa chekuchinja pakudzika kwemavara kana gamma kana chiyero chekuzorodza chikachinja.
Mavara ekuratidzira, kazhinji, anosiya kamuri kadiki kekunyunyuta. Iyo Samsung Galaxy Note 20 Ultra ine imwe yemapanya anooneka anogoneka anowanikwa pane yefoni nhare. Uye zvakare, Samsung inoda iyo yepamusoro soro kupenya kukosha kwe1400nits. Kunyange ini ndisina michina yakakodzera yekutarisa izvi, ini ndawana iyo inoratidzira inoshamisa kupenya kunze uye inoverengwa nyore kunyange pasi pezuva.
Nekusajeka, zvakadaro, pane inoonekwa off-axis ruvara chinja paunotarisa skrini kubva pakona ye45 °. Iyi shanduko yemuvara inoguma matoni anodziya achiverengerwa nekuwedzera kwegreen green. Shanduko yemuvara wakafanana inowoneka zvakare pamativi akapetwa echiratidziro, asi kazhinji haikuvadze.
Kusiyana nezvimwe zvakapfuura-genGenha Gadhi rezvinyorwa, iyo Galaxy Inota 20 Ultra inongova nejira rakapfava padivi pemupendero. Mukushandiswa kwakawanda, mativi akapetwa haakonzere chero kukanganisa kwekubata. Iyo inoratidzira ine 240Hz yekubata sampling chiyero (iyo yakajairwa iyo iyo vhoti yekuratidzira yekubata pane iyo kuratidza). Nekuda kweizvozvo, iyo inoratidzira haisi kungoyerera chete asiwo inonzwisisika inoteerera kubata. Samsung inoita kunge yakashandisa kuchengetedzwa kuti isabatike netsaona kumucheto, kuti ma swipes akamira padivi pemashure anogona kusashanda apo swipes dzakatwasuka (for the back gesture) dzakakanganisika.
Pakati pezvose, kuratidzwa pane Samsung Galaxy Note 20 Ultra chimwe chezvikonzero zvinotungamira nei chiri chinhu chekutanga kifaa. Icho chinongogadzirisa chikamu kushaiwa rutsigiro rweyero yekuzorodza ye120Hz pa1440p resolution, asi kana izvo zvikasazvinetsa iwe zvakanyanya, kuvaka nekuratidzira kwakasanganiswa kunogona kupa chiitiko chinonakidza kwazvo. Uyezve, ivo vari mukati meGlass Note 20 Ultra zvakare vanoita basa rakakosha mukuumba icho chiitiko.
Izvi zvinounza kwatiri kwatinokurukura kuita kweGlass Note 20 Ultra, pamwe nekusarura kweSamsung kune yayo Exynos chipsets.
Iyo Samsung Galaxy Cherechedzo 20 Ultra pasina mubvunzo iri puramu yepamu, nekuda kwekutaridzika kwayo kwakanaka uye kuratidzika kwakanaka. Kuita kwacho, zvisinei, ndipo panowanikwa zvinhu. Kufanana nemazhinji emharembozha ye Samsung, yeGlass Note 20 Ultra ngarava mbiri dzakasiyana dzechifo dzinobva padunhu. Izvo zvikamu zvinotengeswa muNorth America, China, South Korea, uye Japan zvinowaniswa ne Qualcomm Snapdragon 865 Uyezve nharembozha, nepo nyika yese ichitambira Samsung Exynos 990 chipset. Iyo chipset yakapetwa ine kusvika ku12GB yeLPDDR5 RAM pane 5G akasiyana uye 8GB yeLPDDR5 RAM pane 4G-chete akasiyana (yemisika inosarudzwa).
Iyo Exynos 990 yakagadzirirwa pa7nm maitiro uye inoratidzira octa-yakakosha CPU inogadziriswa inoumbwa ne:
2 Exynos M5 "hombe" cores yakavharwa kusvika ku2.7GHz,
2 "yepakati" performance cores yakavakirwa pane iyo ARM's Cortex-A76 dhizaini uye yakavharwa kusvika ku2.5GHz, uye
4 "diki" kunyatsoenderana neayo ARM's Cortex-A55 dhizaini nevhiri rinomhanyisa kusvika ku2.0GHGHz.
Iyo Exynos M5 yakakosha chikamu chemakambani Mongoose chirongwa chakapera gore rapfuura nekudzingwa kwevashandi makumi matatu nevatanhatu kubva pavashandi veSamsung Austin Research Center (SARC), uye nekudaro, kusiiwa kweiyo CPU yekuvandudza kuedza. Izvi zvinoreva kuti Samsung ichavimba zvizere neArM's IP yenguva yemberi Exynos chips, uye Exynos 290 inotarisirwa kuve yekupedzisira chipset akateedzera neM990 cores.
Exynos 990 zvakare ine iyo Valhall-based Mali-G77MP11 GPU yakavhara nguva zhinji kusvika 800MHz. Mukuwedzera, iyo chipset inoratidzira kubatana kwe5G neiyo Samsung's 5G Modem 5123. Iyo LTE-kusiana kusiyanisa chishandiso ine modem imwe chete asi inoshaya anoshanda 5G RF system.
Samsung's Exynos chipsets dzakasarira kumashure kweavo Qualcomm vatengesi kune zvizvarwa zvakati zvino. Kusiyana neExynos 990, iyo Snapdragon 865 Plus inoshandisa Prime uye Performance cores yakavakirwa pane iyo ARM's Cortex-A77 aratidziro ane simba rakawanda kupfuura Exynos M5 uye yayo Cortex-A76 musikirwo kuvaka.
Muna wake ongororo yeiyo Samsung Galaxy S20 + (Exynos) musiyano, Zvimiro anocherekedza kushomeka muzviratidzo zvakawanikwa neExpynos 990 mumabhenji ekugadzira achifananidzwa ne Snapdragon 865 SoC, uye zvaakawana zvinosimbiswa mune yake kuenzanisa pakati peiyo OnePlus 8 Pro uye iyo Galaxy S20 + (Exynos). Iyo gap mukuita inotarisirwa kuwedzera mberi ne Snapdragon 865 Plus, uye isu tichave tichienzanisa iyi misiyano mune imwe chikamu chakatsaurwa kuenzanisa pakati peSnapdragon uye Exynos kusiyanisa kweGreen Note 20 Ultra.
Kuti uwedzere kutarisa, ini ndakafananidza mhedzisiro yemabhenji ekugadzirwa paGirazi Tarira 20 Ultra ne ASUS ROG Runhare 3 (ongororo) powered the Snapdragon 865 Plus, uye mhedzisiro, kutaura zvishoma zvikuru, yaitarisirwa. Pano pane tafura ichienzanisa izvi zvabuda.
Samsung Galaxy Cherechedzo 20 Ultra 5G (Exynos 990)
ASUS ROG Runhare 3 (Qualcomm Snapdragon 865 Plus)
Imwe-yakakosha 934 982
Multi-musimboti 2783 3340
uchitikurudzira 11624 15178
Web Kutsvaga 12134 14715
kunyora 11095 14772
Data Dhiyabhorosi 8591 10589
Sezvinoratidzirwa neGeekbench 5 uye PCMark Work 2.0 zvikoro zviri pamusoro, iyo Exynos 990 inosara kumashure kweSnapdragon 865 Plus mune zvese zvikamu. Ichi chiratidzo chakajeka chekuti vatengi vanotambura nekusapihwa sarudzo yekutenga iyo Snapdragon 865 Plus inosiyana yeiyo smartphone.
Iyo Galaxy Cherekedza 20 Ultra, zvirinani, haisi kuodza mwoyo kana zvasvika pakumhanya kwekuchengetedza. Iyo inoratidza iyo UFS 3.1 yekuchengetedza, ichidhonzera mumatanho ekuverenga kumhanya - sekuyerwa neAndroBench - iri muwandu wegumi nemazana gumi nematanhatu. Heano mhedzisiro kubva kune maviri akateedzana kumhanya:
Kana zvasvika pakutamba, zvinhu hazvina kunyanya kusiyana. In PUBG Mobile, Exynos 990 inodzikamisa gameplay kune Ultra frame rate (40fps) pane Zvakajairika mifananidzo uye inongobvumira yakanyanyisa furemu zviyero (60fps) kana iwo mufananidzo wekutarisirwa wakaiswa kune yakadzika kuisa, kureva. Smooth. Ini ndaishandisa PUB Gfx Chishandiso app kuvhura HDR kuratidza maseteni kuExperior furemu chiyero uye kuyera zvawanikwa uchishandisa Gamebench:
Kunyangwe iwe ungatarisira kuti mureza wehuratidziro ubate zvigadziro izvi zvakanaka, iyo yeGlass Note 20 Ultra stutters uye inotambura kubva kumahombe makuru ehuremu madonhwe. Iyo chiyero chiyero oscillates pakati pe40 uye 60fps, ichidonha nemaonero ega ega uye zvichikonzera kusagutsikana kwazvo.
Iwo mafuroni anodonha anonyanya kuoneka kana zvigadzirwa munzvimbo yako yepedyo zvichichinja nekukurumidza, saka iwe uri pane chisina kunaka nguva yega yega yaunoita mukupfura-padyo kupfura. Ndakawana chiyero chepakati che54fps ine FPS kugadzikana kwe93%. Izvi zvinoreva kuti 93% yenguva ichiri kutamba mutambo, chiyero cheyakaumbwa hachina kubva pamureza we makumi matanhatu nemashanu. Zvichakadaro, iyo musiyano index ndeye 54fps, zvinoreva kuti chiyero chikamu chakasiyana 4.40fps (kureva. Pakati pe4.40fps uye 49.6 fps) panguva yemutambo. Kune 58.4% yasara yenguva, kusimuka kwacho kwaive kwakanyanya asi hakuna kukanganisa kukosha kwepakati.
GameBench Nharaunda Yakasarudzika (FPS isina mudzi) (Mahara, Google Play) →
Kutenda kune GameBench kutipa rezinesi revatori venhau. GameBench inokodzera zvishandiso zvevashandisi kuti vaongorore kuwanda, kushandiswa kwesimba, uye ndangariro kushandiswa kwemitambo. GameBench inowanikwa se app paGoogle Play Store (isina kunyorwa) uye sechinhu chinoshandiswa desktop. Kuti uwane rumwe ruzivo, shanya AkasInBen.com.
Kana zvasvika kune odhiyo, vatauriri vaviri stereo vatauri pa Samsung Galaxy Cherekedza 20 Ultra ruzha rwakagwinudzwa uye husina kuringana maererano nehoriyumu. Mukurukuri wepamberi-kupfura mukurukuri anonzwika zvakanyanya uye anokwanisa kuburitsa huwandu hwakafambika nepo speaker yepiri ichinyudzwa munzeve yekutarisa inonyanya kutarisa pane hwepakati uye hwakakwirira mawere. Mutauri wepasi-unopfura kazhinji anogona kukanganiswa kana kuvharika zvachose kana foni iri kubatwa mumamiriro ezvinhu, ichidonhedza ruzivo rwekuteerera.
Samsung inosunga vaviri-mu-nzeve maitiro wiredhi nhare dzinodzikwa ne AKG mukati mebhokisi. Kuti uwane ruzivo rusina waya, iwe unogona kutora izvozvi bhinzi-yakaumbwa Galaxy Buds Kurarama kana chero imwe foni yeBlue kana mahedhifoni esarudzo yako.
Panyaya yekutsikiswa kwesoftware, iyo Samsung Galaxy Note 20 Ultra inouya neDolby Audio, ichibvumidza iwe kumisikidza EQ ine simba iyo inoshanduka yega neicho chiri kuridzwa. Iwe unogona zvakare kutsanangura yako yega EQ kubva mukati megadziridzo uye ita nekuongorora kwekuenzanisa kwakafanana nezvimwe Samsung zvigadzirwa.
Imwe UI 2.5 paGirazi Onai 20 Ultra
Iyo Samsung Galaxy Cherechedzo 20 Ultra inomhanya Imwe UI 2.5 yakavakirwa paApple 10 kunze kwebhokisi. Kunyangwe iyo interface iri kuoneka zvakafanana neUni UI 2.0 uye 2.1, pane zvimwe zvekuwedzera zvinouya kutanga kune Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Pakati pezvinhu izvo zvichangobva kuwedzerwa kune Imwe UI kutanga neGirazi Note 20 Ultra ndeiyi:
Zvitsva zveGoogle Nearby Share protocol yekukurumidza kukurumidza-mhando faira kutamiswa,
Wireless Samsung DeX inobvumira vashandisi kubatana neasina waya yekushandisa uye inoshandisa DeX modhi nefoni inoratidzwa inoshanda seye trackpad, uye
Windows 10 kubatanidzwa kwekuwana mafaera akachengetedzwa pane iyo smartphone kubva kuPC uchishandisa iyo Foni yako Shamwari app uye otomatiki syncing Samsung manotsi neMicrosoft OneNote. Maiwe, hapana chakafanana chinhu kune vashandisi veMac.
Uye zvakare, iyo S pen ndiyo yakakosha chikamu cheCherechedzo yemushandisi ruzivo. Sezvinoitwa neGlass Note 10, iwe unosunungura iyo S Pen kunze kweGreen Note 20 Ultra uye tora zvinyorwa zvakananga pachiratidziro, kunyangwe usingavhuri foni. Aya manotsi anochengeterwa iyo Samsung amanotsi eapp programu pachako kana iwe uchiisa iyo S Pen kumashure mune yayo slot. Samsung inodaidzira kuti yakavandudza chiitiko cheS pen ne software optimization iyo inowedzera mabara ako kunyange usati waidhonza iwo munyama. Izvi zvinoguma yakadzikira latency chete 10ms uye inokupa iwe kunzwa kwechokwadi kunyora papepa.
Mukuwedzera, kune boka remhepo mafambiro anokubvumidza kuti udzore iyo 20 kuburikidza nekuzunungura iyo S pen mune mamwe mafambiro ari pedyo nekuratidzwa. Nepo mhepo yemidzimu yakanyatsonaka, kushandisa kwavo kwakanganisika pakushandura modhi pamakamera kana kushandisa S Pen seanodzora mharidzo.
Iyo yemushandisi inonzwa uchizikanwa kune chero munhu akamboshandisa Samsung's One UI. Sezvandakambotaura, hapana kana shanduko yekuona inouya neUni UI 2.5. Mukuwedzera, Samsung ine zvakare yakavimbisa dzinenge zvitatu zvizvarwa zve OS OS, zvichireva kuti Galaxy Note 20 Ultra inofanirwa kuwana shanduro nzira yese kuenda ku13.
Iyo chete bakoat ine iyi software chiitiko ndeyekuti kunyangwe iri mutengo wekutanga mutengo, Samsung ichine iyo discacity yekuputika kushambadzira kuburikidza ne push notices seidzi:
Iyo Galaxy Note 20 Ultra inorongedza mubhatiri ye4,500 4,300mAh, iyo yakakura zvishoma kupfuura iyo 10mAh bhatiri pane Galaxy Note 4+. Ini ndakakwanisa kuwana zuva rakakosha rehupenyu hwebheti ne5-120 maawa e-screen-on-nguva iri kumhanya pa2.0Hz uye uye Full HD +. Kuyera huwandu hwehupenyu hwebhatiri, ndakamhanya PCMark's Work 60 Battery bvunzo pane akasiyana maratidziro. Mhando dzakasiyana dzekuratidzira dzebvunzo dzinosanganisira 120Hz paH Full HD + resolution, 60Hz ine Full HD + resolution, uye XNUMXHz paWQHD + resolution, uye mhedzisiro ndeinotevera:
Sezviri pachena, iyo 120Hz modhi inodhonza bhatiri rakawanda asi zvakare inoguma neyakajeka ruzivo mumazuva-zuva mabasa ayo PCMark Work 2.0 benchmark simulates. Zvinoshamisa kuti, zvakadaro, kushandiswa kwebhetri mu120Hz kwakanyanya kutopfuura kupfuura 60Hz modhiyo pane WQHD + kuratidza kurongedza. Nekudaro, hupenyu hwebhatiri zvirokwazvo ndeyekutengesa kana iwe uchida kufarira kusheedzera kweiyo 120Hz kuratidzwa.
Panyaya yekuchaja, iyo Galaxy Note 20 Ultra inouya ne25W charger inoshanda pamusoro peiyo USB-PD PPS protocol. Iyi inhanho inodzokera kumashure kubva ku45W yekuchaja rutsigiro pane yeGlass Note 10 Series. Samsung inoti iyo 25W charger iri mubhokisi inogona kubhadharisa bhatiri ne50% mumaminetsi makumi matatu uye zvizere munenge awa, asi izvi zvirevo zvinosiyana nekuedzwa kwedu.
Uchishandisa iyo mu-bhokisi charger, iyo Samsung Galaxy Note 20 Ultra inotora maminetsi makumi matatu nemashanu yekuchaja kubva ku35% kusvika ku10% bhatiri huwandu uye inosvika 50% muhuwandu hwemaminitsi zana. Kana iwe uri kuronga kutanga kunotonhora, iyo Galaxy Note 100 Ultra inogona kutora zvishoma kupfuura maawa maviri kubhadharisa kubva ku100% kusvika ku20% bhatiri. Unogona kushandisa iyo 0W Samsung charger - kana zvimwe USB-PD PPS-inotsigirwa nekukurumidza charger - neGlass Note 20 Ultra, asi simba rekuchaja harizodarika 25W.
Iwe zvakare unokwanisa kubhadharisa iyo Galaxy Note 20 Ultra isina waya kusvika ku 15W uchishandisa yakatsigirwa isina waya machaja, kana unogona kuchaja inosvika ku 10W uchishandisa chero Qi-yakavanzika isina waya charger. Heano edu ekuteya yakanakisa isina mawaya machati iwe aunogona kushandisa neiyo Galaxy Cherekedza 20 Ultra.
Zvese mune zvese, bhatiri riri paGlass Note 20 Ultra yakakwana - kunze kwekunge, shuwa, iwe mutambo wakawanda, izvo zvatakadzidza chipset haisi iyo yakanakisa pane. Panguva iyo yekuchaja kweiyo smartphone ingasapfuura zvinotarisirwa, kunyanya ichienzaniswa nedzimwe mureza senge Xiaomi mi 10 pro, yakakwana kune vazhinji vashandisi.
Iyo Samsung Galaxy Cherekedza 20 Ultra inoratidzika nekatatu kamera setup kumashure kune kamera ye108MM yepuraimari, kamera inosvika 12MP Ultra-wide-angle, uye 12MP periscopic telephoto kamera ine 5x Optical zoom. Iyo kaburi-punch selfie kamera pamberi ine resolution ye 10MP.
Iyo yekutanga kamera inoshandisa zvakafanana Samsung ISOCELL Yakajeka HMX sensor iyo yatakaona pane iyo Galaxy S20 Ultra uye boka re Xiaomi smartphones. ISOCELL Bright HMX ine sensor saizi ye1 / 1.33 ″ iyo yakanyanya kukura kupfuura iyo 64MP Samsung ISOCELL Yakajeka GW1. Mifananidzo yakatorwa neiyi sensor ine pixel saizi ye 0.8μm. Iyo kamera yakarukwa ne f / 1.8 lens uye inogona kutora nemifananidzo gumi nemaviri nerubatsiro rwe12-mu-9 pixel binning. Uyezve, iyo kamera inotsigira OIS.
Iyo 12MP Ultra-wide-angle-kamera inowedzera iyo purview kune 120 °. Iyo ine f / 2.2 lens uye inogona kutora mifananidzo ine pixel saizi ye 1.4μm. Imwe bakoat ine kamera iyi ndeyekuti inoshaya autofocus kugona.
Samsung iri kushandisa 12MP periscopic zoom setup ye5x optical zoom uye inosvika 50x digit zoom. Iyo kamera yakapetwa ne f / 3.0 lens uye inotsigira OIS uye yekutarisisa yekutsvaga. Samsung iri kudonhedza iyo gimmicky 100x Space Zoom kushambadzira kubva ku Samsung Galaxy S20 Ultra uye iri kuronga gadziriro iyi 50x yekugona kwayo "Space Zoom", inotarisirwa nekugona kwayo kutora mifananidzo yezvinhu zvekudenga zvinosanganisira mwedzi.
Panyaya yevhidhiyo, iyo Samsung Galaxy Note 20 Ultra inogona kurekodha mumasero anosvika 8K pa 24fps kana 4K pa60fps. Foni inotsigirawo Yakazara HD kurekodha pa120ff pamwe chete neProVideo mode maunogona kuchinja marongero sekuratidzira, tarisa, ISO, shutter kumhanya, uye kutungamira kwemaikorofoni uku uchidhinda vhidhiyo.
Heano mamwe e samples dzatakatora tichishandisa iyo Samsung Galaxy Note 20 Ultra:
Yekutanga Kamera ine iyo yekumisikidza zvigadziriso
12MP mifananidzo iri kuruboshwe apo inoenderana 108MP mifananidzo iri kurudyi
Ultra-wide-angle mifananidzo iri kuruboshwe, yakajairwa mifananidzo iri kurudyi
Kubva kuruboshwe kurudyi: Mifananidzo pa1x, 5x, 10x, uye 50x zoom
Iwe unogona kuwana iyo yose yemifananidzo mukugadzirisa yakazara muFlickr album pazasi:
Samsung Galaxy Cherechedzo 20 Ultra 5G (Exynos): Kusimudza Bar yePrimari yeMutengo
Iyo Samsung Galaxy Note 20 Ultra zvirokwazvo ndeimwe yemafoni anonyanya kufadza ayo akatanga gore rino. Inotaridza imwe yezvakanakisa magadzirirwo pane Samsung kifaa parizvino, inoyevedza uye yakareba marefu, kamera inovimbisa, uye S Pen chiitiko - icho chinoramba chakasarudzika nechero imwe brand kusvika zvino.
Nekudaro, iyo Exynos 990-inofambiswa neGeneral Note 20 Ultra inoita seyakaodza mwoyo kana zvasvika pakuita, uye izvo zvinogona kuita mutambudzi wevashandisi vanoda kutamba. Izvi zvinonyanya kushungurudza mafeni sezvo Galaxy Cherechedzo yakaramba ichiridzwa semhando yepamusoro senzira yevanofarira. Iyo Exynos Galaxy Cherekedza 20 Ultra inongoda chete kune chero munhu anotsvaga iyo yepremiyamu dhizaini, inoratidzwa, uye chiitiko chechiitiko asi pasina chero hanya yekusundira kuita kwacho kusvikira kumugumo wayo.
Ndokusaka ndisingakwanise kukurudzira kune wese. Izvi hazvireve kuti zvinoreva kuti Exynos Galaxy Note 20 Ultra foni yakashata - haina! Iyo haisi iyo yakanyanya kunaka smartphone kana iwe uchida kufadza vezera rako panguva yemusangano wedare uye tora huku yekudya mushure mezuva rinonetesa kubasa. Zvichida ndizvo zvazviri neiyo Snapdragon 865 Plus mutsauko yefoni.
Isu tichave tichiwedzera mamwe mabheti kuongororo iyi mumazuva mashoma anotevera uye tichawedzera ratidziro yedu kuita zvimwe zvidimbu zvakazvitsaurira. Iyo Glass Note 20 Ultra parizvino yakakwira pre-kurongeka kupota nyika, uye kuburitsa kunotanga pamisi dzakasiyana pasi rese. Isu takadzivirira zvakanakisa zvibvumirano zvaunogona kuwana pane yeGreen Note 20 Ultra muUS uye muIndia. Tarisa uone kana uri kutarisa kutenga iyi smartphone.
Kutanga ku $ 1,299 ye128GB ne12GB RAM
Kana iyo Galaxy Cherechedzo 20 Ultra - iri neakanakisa mafungidziro pane chero Galaxy Cherechedzo, uye mamwe makiyi ekuvandudza vsakasiya Galaxy S20 Ultra - iri foni yako inotevera, isvute parutivi pamwe nerakawanda renhau dzinoenderana paAmazon.
The post Samsung Galaxy Cherechedzo 20 Ultra Ongororo: Kune Vaya Ari Mberi kweCurve yakatanga kutanga xda-vatadzi.